Tanjona ho an'ny taona 2007 | Martech Zone
Alarobia 24 Janoary 2007 Alahady, Jolay 27, 2014 Douglas Karr
Izaho dia mpino ny tetik'asa. Tsy tokony hifarana ny fivoriana, ny drafitry ny tetikasa na ny drafitry ny fampandrosoana manokana raha tsy misy valiny amin'ny fanontaniana 3:
Raha tsy mametraka tanjona amiko ny hafa dia miasa aho mametraka azy ho ahy. 2007 dia mahatsapa fa ho taona mahafinaritra.
Iza? Me. Rahoviana? 2007. Inona? Ireto ny tanjoko:
Ampio ny zanako lahy amin'ny fomba rehetra azoko atao (ara-bola ny ankamaroany) mba hahazoany diplaoma am-boninahitra ary mahomby amin'ny taona voalohany ao amin'ny Purdue University ao IUPUI. Ny dingana voalohany dia tsy misy intsony - efa nekena izy.
Fenoy ny boky teknolojia momba ny fanaovana bilaogy. Rehefa nanoratra ny mpitari-dalana Blogging E-Metrics Simplified aho dia tena tratrako ilay bibikely manoratra. Ka efa niasa aho Blogging - Taona voalohany, nanomboka tamin'izay. Tohizo ny rantsan-tànanao… Nandefa drafitra tany amin'ny mpamoaka lahatsoratra aho minitra vitsy lasa izay.
Fandaharana ny lohahevitro manokana ary apetaho amin'ny tranokala SeanRox hafa, Open Community Community. Tsy faly amin'ilay lohahevitro ankehitriny mihitsy aho… tsara ny lafiny teknolojia, saingy mila asa be momba ny hatsarana izany. Izy io dia tsy maneho tsara ny atiny izay ezahiko ho entina aminareo isan'andro.
Fandaharana plugin WordPress ahy manokana. Nanova ny a Contact Form plugin hanakanana ny Spam tsy ilaina intsony taloha… fa te hanana plugin avy hatrany aho.
Ampio ny mpampiasa ahy hitarika ny fampiharana anay ho amin'ny zavatra mampino indrindra SaaS fampiharana ny indostrian'ny tranonkala efa nahita na nampiasaina. Nanana fitomboana sy fahombiazana mahatalanjona izahay tao anatin'izay roa taona lasa izay, saingy tonga ny fotoana nijanonantsika tsy hikorontana ary navelantsika tao anaty vovoka ilay orinasa. Ity tanjona ity no mitazona ahy amin'ny alina.
Midira amin'ny endrika! Fantatro fa tena cliche izany, saingy reraky ny ankamaroan'ny fotoana aho ary tsy manao fanatanjahan-tena saiky tokony ho araka ny tokony ho nataoko. Raha ny marina dia niverina tamin'ny bisikileta fanazaran-tenako aho tamin'ity faran'ny herinandro ity tamin'ny volana voalohany. Mametraka ahy eo amin'ny vodin'ako isan'andro ny asa ary mitazona ahy amin'ny alina ny fanaovana bilaogy. Tsy maintsy manova ny fahazarako aho!
Ka eo no anananao… ny tanjoko ho an'ny 2007. Inona ny tanjonao? Raha mbola tsy namorona ianao dia azafady mba zarao amin'ny bilaoginao. Mametraha làlana hiverina amin'ity fidirana ity ho anao mba hahafahantsika rehetra mihaona amin'ny volana Janoary ho avy izao ary mifanakalo hevitra momba ny fomba nanao.
Tags: 2007douglas karrtanjonaWriting
24 Jan 2007 amin'ny 11:42 PM
Nanao lahatsoratra toy izany koa aho tao amin'ny bilaogiko, mitovy hevitra ihany ny saina lehibe 😉
Hevitra iray hafa no hitako tato ho ato dia ny hifampitondra ny tompon'andraikitra amin'ny vokany ara-bola, ohatra, i Joe milaza amiko fa hahatratra ny tanjony amin'ny fanavaozana ny tranokalany amin'ny asabotsy ho avy izao ary raha tsy manao izany izy dia 20 $ no ananany.
Mahagaga fa manampy betsaka ny olona hahatratra ny tanjony izany. Eto ny lahatsoratra.